ထိပ်တန်း 10 Windows ကိုကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံးက Windows အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်း 10 Windows ကိုကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံးက Windows အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
Loading ... မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, လူတွေကယနေ့ခေတ်မှာတဲသွားလာရင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းတွေအများကြီးကစားရန်။ ဤသည်တည်ငြိမ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအားလုံးနီးပါးစမတ်ဖုန်းများ, အဟောင်းတွေမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တောင်မှပေါ်ပြေးသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သော်လည်း Apple က iOS ကို, အန်းဒရွိုက် နှင့် ဘလက်ခ်ဘယ်ရီ OS ကို သွားလာရင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အလွန်လူကြိုက်များ, Microsoft Windows နဲ့ဖုန်း OS ကို, လုံးဝအဟောင်းတွေက Windows Mobile ကပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း operating system ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အဖြေကိုပေး၏။ က Windows Phone ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဤကွီးစှာသော operating system ကိုစွမ်းအားဖြင့်နေကြသည်နဲ့ Windows Phone ကိရိယာများပေါ်တွင်စနစ်တခြား Microsoft software နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကအခြားမိုဘိုင်း operating system မြားမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ operating system နဲ့ Windows အတွက်မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအကြောင်းကိုအဖြစ်ကဤ device များအတွက်သင့်လျော်သောပုလောင်းကစားရုံဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤ in- အတိမ်အနက်ကိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
သငျသညျ SpinPalace ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးမိုဘိုင်း version ကိုကမ်းလှမ်းနေသည်နှင့်အတူကပ်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့် Windows OS ကိုအဘို့ကောင်းသောအရာမဇာတိ Apps ကပလက်ျာဘက်ယခုရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံတဦးရဲ့နှင့်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 Windows Mobile အားကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
က Windows Phone OS နဲ့မိုဘိုင်းကာစီနိုဂိမ်း
က Windows Phone OS ကို operating system ကိုအင်အားကြီး Tablets, စမတ်ဖုန်းများနှင့် Pocket PC များနှင့်တူခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီး။ အဆိုပါမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကို Android ဖုန်းများပေါ်တွင်ကစား, ဘလက်ခ်ဘယ်ရီနဲ့ iPhone လူကြိုက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့ပေမယ့်အင်အားကြီးက Windows Phone7နဲ့ Windows Phone 8 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပြန်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားနည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှမှမိုက်ကရိုဆော့ဖဆောင်ခဲ့သောက Windows Phone ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းပါပွီ။ ဤသည် operating system ကို HTC နှင့် Samsung တို့၏မော်ဒယ်များကဲ့သို့အမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ က Windows Phone OS ကိုလည်း Multi-touch နဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာကို support ကြောင့်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းအတော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည်နှင့်သူတို့ပြောင်းရွှေ့အပေါ်တော်တော်လေးအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။
Windows Mobile အားကာစီနိုဂိမ်းဘာတွေလဲ?
Windows ကိုမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံသွားလာရင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံက Windows Phone OS ကိုစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ကိရိယာများပေါ်တွင်ကစားကြသည်။ ဒါ့အပြင်က Windows Phone ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဤကာစီနိုလောင်းကစားရုံနည်းလမ်းများစွာရှိအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံဆင်တူသည်။
တစ်ခုမှာကြီးမားသောတူညီမှုသည်ဤကာစီနိုလောင်းကစားရုံကစားသမားမှာ, အကောင့်ဖန်တီးလောင်းကစားရုံသိုက်နှင့်ထုတ်ယူစေနှင့်သူတို့နေဆဲဆုကြေးငွေများနှင့် Chase ပရိုမိုးရှင်းတောင်းဆိုနိုင်ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ Windows ကိုမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုလည်းလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လောင်းကစားဝိုင်းတရားစီရင်မှုနှင့်အရောင်းအတွေအများကြီးကောက်ယူကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း, သူတို့ကကစားသမားဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးမုန့်ဖုတ် options များဆက်ကပ်။ အဆိုပါလုံခြုံစွာသူတို့ကစားသမားသည်လည်းမိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးချတိုင်းတာသည်။
သို့သျောလညျး, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, က Windows Phone ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကစားသမားဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကမည်သည့်အချိန်တွင်မသွားရအဖြစ်ကစားဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်းယူခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေသူတို့ကိုအတော်လေးဆွဲဆောင်မှုစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ ထိုအကာစီနိုလောင်းကစားရုံခရီးဆောင်ကြောင့်ကစားသမားများညာဘက်သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေ, slot နှစ်ခုနှင့်အခြားလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ရက်ချိန်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းထိုအဂိမ်းများကိုမှာပိုက်ဆံအနိုင်ရတဲ့၏စိတ်လှုပ်ရှား သာ. ကွီးမွတျဖူးပါ။
က Windows Phone များအတွက်ကာစီနိုဂိမ်းများ
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော်လည်း, မိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်းအချို့သောအားနည်းချက်များရှိပါဘူး။ ထိုသို့တဦးတည်းဂိမ်းမျိုးစုံ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်ဂိမ်းများသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံသေးငယ်လောင်းကစားရုံဂိမ်းအစုစုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေခြင်းမှရှေးခယျြဖို့အများကြီးခေါင်းစဉ်ရှိပါသည်။
slot ကဂိမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်စားပွဲနှင့်ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဂိမ်းတစ်ခုသေးငယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်နှင့်အချို့သောခေါင်းစဉ်ကစားတဲ့နှင့် Blackjack ကဲ့သို့ဂန္ပါဝင်သည်အထူးသဖြင့်က Windows Phone များအတွက်လောင်းကစားရုံဂိမ်းလူသိများ Thunderstruck နှင့် Mega Moolah တူသော slot နှစ်ခုအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံး well- ဗီဒီယိုကဖဲချပ်ဝေမူကွဲဂျက်သို့မဟုတ် သာ. ကောင်း၏။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်ဂိမ်းများနှင့်မိမိတို့၏အရည်အသွေးနှင့်ဂရပ်ဖစ်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဆော့ဖ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးသူပေါ်မူတည်သည်။
အဆိုပါ Windows ကိုမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံနှင့်အခမဲ့နှစ်ဦးစလုံးကစားနိုင်ပါတယ်။ က Windows Phone များအတွက်အခမဲ့လောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုသင်ကျွမ်းကျင်မှု, အလေ့အကျင့်လောင်းကစားမဟာဗျူဟာများဆည်းပူးသူတို့ကိုနှင့်လောင်းကစားရုံနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ရွေးချယ်မှုကဆင်းကျဉ်းမြောင်းစေရန်, က Windows Phone များအတွက်ထိပ် 10 အခမဲ့လောင်းကစားရုံဂိမ်းရွှေပြိုင်ပွဲ, Frankie Dettori ရဲ့ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ကစားတဲ့အဖြစ်ဗိုလ်မှူးသန်းနှင့်ချီတူ Mcirogaming ခေါင်းစဉ်, Avalon, Mega Moolah, မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းသန်းနဲ့ချီတဲ့, Tomb Rider ကဲ့သို့ Playtech ခေါင်းစဉ်များမှာ နှင့် Blackjack ။ အဆိုပါဂိမ်းကစားရန်အတော်လေးပျော်စရာဖြစ်ကြပြီးသင်ကယုံကြည်မှုခံစားရတခါ, သင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအဘို့ထိုသူတို့ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
က Windows Phone ကာစီနို App ကို
ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးကို Windows မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားရန်, ကစားသမားများက Windows Phone နှင့်သဟဇာတသင့်လျော်တဲ့လောင်းကစားရုံ app ကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ပထမဦးစွာကစားသမား၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံမှတိုက်ရိုက်က Windows Phone လောင်းကစားရုံ app ကိုရနိုင်သည်။ ယင်းနောက်သူတို့တစ်ဦးတပ်ဆင်ခ link ကိုစလှေတျတျောမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
သင်တန်းကအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ website တွင်ရရှိနိုင်လျှင်ဒုတိယအ, သူတို့ကတစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့ app ကိုရနိုင်သည်။ သူတို့ကကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့သူတို့ကလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်လောင်းကစားရုံတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ရီးရဲလ်ပိုက်ဆံက Windows Phone ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ထိုဂိမ်းများကိုဆော့ကစားထိုကြောင့်, ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်တစ်ဦးသင့်လျော်သောဘဏ်လုပ်ငန်း option ကိုရှေးခယျြနှင့်သိုက်အောင်သိုက်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါသင်အကြိုက်ဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းကူးခေါင်းနှင့်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအနိုင်ရတဲ့စတင်ပါ။
App ကိုဒေါင်းလုပ်မပါဘဲ HTML5 အလုပ်အတွက်လုပ်အချို့က Windows Phone ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ။ ဥပမာအားဖြင့်လည်း HTML7 နှင့်အတူလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာက Windows Phone5ကစားသမားရိုးရှင်းစွာ web browser ကိုအတွက် URL ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံသွားရောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းကစားရန်သူတို့တစ်တွေသိုက်စေနှင့်ကစား start, အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ရဲ့ login လိုအပ်ပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 Windows Mobile အားကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.1 က Windows Phone OS နဲ့မိုဘိုင်းကာစီနိုဂိမ်း
2.2 Windows Mobile အားကာစီနိုဂိမ်းဘာတွေလဲ?
2.3 က Windows Phone များအတွက်ကာစီနိုဂိမ်းများ
2.4 က Windows Phone ကာစီနို App ကို